Ireo vovonana efa notanterahana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Mey 2019 3:16 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Español, 繁體中文, Português, українська, English
Koa satria tsy manana birao mivaingana hitamaso amin'ny asa ataonay isan'andro izahay dia nikarakara ny fivoriana fanao isan-taona ho an'ny vondrom-piarahamoninay virtoaly izahay tany ampiandohana mba hihaonan'ny Global Voices mivantana.
Nampihaona ireo mpikatroka manerantany avy amin'ny fampitam-baovaon'olon-tsotra sy nomerika izay tena mahavita zava-baovao ary manome aingam-panahy indrindra ireo Vovonana sy ireo Fihaonan'ny Bilaogera Arabo hanaovana atrikasa sy adihevitra. Niteraka finamanana vaovao sy fiaraha-miasa mahatalanjona miampita sisintany ny fivoriana maharitra 2 ka hatramin'ny 4 andro. Tsikaritra foana ao amin'ny fandaharam-potoana ny sakafo matsiro, ny fitsangatsanganana, ary ny mozika .
Miezaka ny mihaona any amin'ny firenena vaovao izahay isaky ny mandeha. Efa nanao fivoriana miisa 11 izahay nanomboka hatramin'ny 2005 noho ny fahalalahan-tanan'ireo mpanohana sy ireo namana:
Filipina – 2015
Jordana – 2014 (Fihaonan'ny Bilaogera Arabo)
Tonizia – 2011 (Fihaonan'ny Bilaogera Arabo)
Shily – 2010
Beirota – 2009 (Fihaonan'ny Bilaogera Arabo)
Beirota – 2008 (Fihaonan'ny Bilaogera Arabo)
Teraka nandritra ny fihaonana iray andro tamin'ny volana Desambra 2004 tao Harvard Law School ny Global Voices izay nihaonan'ireo bilaogera manerantany niresaka fa ahafahana manamora ny fifanakalozan-kevitra erantany hatreny an-kianja ny famahanam-blaogy.